ထိုင်ခုံနေရာထမပေးလို့ စကတ်လှန်ပြထားတဲ့အမျိုးသမီး (ရုပ်သံ) - Real Gaming Myanmar
By zc / 1 week ago / International News / No Comments
အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ လိုင်းကားတွေ ရထားတွေ စီးတဲ့အခါ ထိုင်ခုံ နေရာတစ်နေရာ ရဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် ရုံးတက် ၊ ရုံးဆင်း လူအသွားအလာ များတဲ့ အချိန်တွေ ဆိုရင် ကားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံနေရာ ရဖို့က မဖြစ်နိုင် သလောက်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် စာနာ နားလည် တတ်တဲ့ ခရီးသည် အချို့ ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ သံဃာ ၊ သီလရင်တို့ တက်လာရင် သူတို့ရဲ့ ထိုင်ခုံ နေရာကို ဖယ်ပေးတတ် ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခရီးသည် တိုင်းတော့ ဒီလို စိတ်ထားမျိုး မရှိနိုင်ပါဘူး … ။
လတ်တလော မော်စကို နိုင်ငံက မြေအောက် ရထားပေါ်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်ပျက်ဟာ ထူးဆန်း လွန်းပါတယ် ။ တစ်ရက် တစ်ရက်ကို လူ ၇ သန်းလောက် ဥဒဟို စီးနင်းလိုက်ပါ နေတဲ့ မြေအောက် ရထားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံ နေရာ တစ်နေရာ ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး ။ ဒီအချိန်မှာ ခရီးသည် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ထိုင်ခုံ နေရာရပြီး ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသားကို နေရာက ထပေးဖို့ တောင်းဆို တာကို အမျိုးသားက ငြင်းပယ် လိုက်ရတဲ့ အတွက် သူမရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ဝတ်ထားတဲ့ စကတ်ကို လှန်ကာ အတွင်းခံကို ချွတ်ပြီး ဝတ်လစ် စလစ်နဲ့ နေပြလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ် … ။
သူမဟာ ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသား နားကို ချဉ်းကပ်ပြီး နေရာထ ပေးပါလားလို့ ပြောတဲ့အခါ “ အမျိုးသားက ငါကဘာလို့ ထပေးရမှာလဲ..? ” လို့ တုံ့ပြန် လိုက်ပါတယ် ။ ဒီအခါ အမျိုးသမီးက သူ့ရဲ့ စကတ်ကို အပေါ်လှန် မတင်ပြီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချကာ သူမရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို လက်ညိုးနဲ့ ထိုးပြပြီး “ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒါကြောင့်ပဲဟဲ့.. ငါက အမျိုးသမီးလေ..! ” လို့ ရုတ်တရက် ပြောချ လိုက်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးက သူဒီလိုလုပ်ပြ လိုက်လို့ ထိုင်ခုံကနေ ထပေးကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားပေမယ့် ဘယ်သူကမှ နေရာ ထမပေးတာကြောင့် ခေါင်းမာစွာနဲ့ ဘူတာ အချို့ကို အောက်ပိုင်း ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ စီးနင်း လိုက်ပါခဲ့ ပါတယ် … ။
ရထား အဝင်အထွက် တံခါးနားက မှန်ကွယ် ကိုမှီပြီး အောက်ပိုင်း ဗလာနဲ့ လိုက်ပါလာတာကြောင့် ရထား ဘူတာ ရောက်တိုင်း အတက်အဆင်း ခရီးသည်တွေက သူမကိုကြည့်ပြီး တွန့်သွားကြပါတယ် ။ ဒီအဖြစ်ပျက်ကို ခရီးသည် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ရုပ်သံရိုက်ကူးခဲ့ ပါတယ် ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အမျိုးသမီးဟာ အဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်နော် … ။
ထိုငျခုံနရောထမပေးလို့ စကတျလှနျပွထားတဲ့အမြိုးသမီး (ရုပျသံ)
အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပါပဲ လိုငျးကားတှေ ရထားတှစေီးတဲ့အခါ ထိုငျခုံနရောတဈနရော ရဖို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ရုံးတကျ၊ ရုံးဆငျး လူအသှားအလာမြားတဲ့အခြိနျတှဆေိုရငျ ကားပျေါမှာ ထိုငျခုံနရောရဖို့က မဖွဈနိုငျသလောကျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ စာနာနားလညျတတျတဲ့ ခရီးသညျအခြို့ကတော့ ကိုယျဝနျဆောငျ၊ သကျကွီးရှယျအိုနဲ့ သံဃာ၊ သီလရငျတို့တကျလာရငျ သူတို့ရဲ့ ထိုငျခုံနရောကို ဖယျပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခရီးသညျတိုငျးတော့ ဒီလိုစိတျထားမြိုး မရှိနိုငျပါဘူး …။
လတျတလော မျောစကိုနိုငျငံက မွအေောကျရထားပျေါမှာ ဖွဈသှားတဲ့အဖွဈပကျြဟာ ထူးဆနျးလှနျးပါတယျ။ တဈရကျတဈရကျကို လူ ၇ သနျးလောကျ ဥဒဟိုစီးနငျးလိုကျပါနတေဲ့ မွအေောကျရထားပျေါမှာ ထိုငျခုံနရော တဈနရောရဖို့ မလှယျပါဘူး ။ ဒီအခြိနျမှာ ခရီးသညျ အမြိုးသမီးတဈယောကျက ထိုငျခုံနရောရပွီး ထိုငျနတေဲ့အမြိုးသားကို နရောကထပေးဖို့ တောငျးဆိုတာကို အမြိုးသားက ငွငျးပယျလိုကျရတဲ့အတှကျ သူမရဲ့အောကျပိုငျးမှာ ဝတျထားတဲ့ စကတျကိုလှနျကာ အတှငျးခံကိုခြှတျပွီး ဝတျလဈစလဈနဲ့ နပွေလိုကျတဲ့ ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ …။
သူမဟာ ထိုငျနတေဲ့ အမြိုးသားနားကို ခဉျြးကပျပွီး နရောထပေးပါလားလို့ ပွောတဲ့အခါ “အမြိုးသားက ငါကဘာလို့ ထပေးရမှာလဲ..?” လို့ တုံ့ပွနျလိုကျပါတယျ။ဒီအခါ အမြိုးသမီးက သူ့ရဲ့စကတျကို အပျေါလှနျမတငျပွီး အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ခြှတျခကြာ သူမရဲ့ မိနျးမကိုယျကို လကျညိုးနဲ့ထိုးပွပွီး “ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒါကွောငျ့ပဲဟဲ့.. ငါက အမြိုးသမီးလေ..!” လို့ ရုတျတရကျပွောခလြိုကျပါတယျ။ အမြိုးသမီးက သူဒီလိုလုပျပွလိုကျလို့ ထိုငျခုံကနေ ထပေးကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ထားပမေယျ့ ဘယျသူကမှ နရောထမပေးတာကွောငျ့ ခေါငျးမာစှာနဲ့ ဘူတာအခြို့ကို အောကျပိုငျးဝတျလဈစလဈနဲ့ စီးနငျးလိုကျပါခဲ့ ပါတယျ …။
ရထားအဝငျအထှကျ တံခါးနားက မှနျကှယျကိုမှီပွီး အောကျပိုငျးဗလာနဲ့ လိုကျပါလာတာကွောငျ့ ရထားဘူတာရောကျတိုငျး အတကျအဆငျးခရီးသညျတှကေ သူမကိုကွညျ့ပွီး တှနျ့သှားကွပါတယျ။ဒီအဖွဈပကျြကို ခရီးသညျ အမြိုးသမီးတဈယောကျက ရုပျသံရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ သိပျမကွာခငျမှာပဲ အမြိုးသမီးဟာ အဝတျအစားတှေ ပွနျဝတျခဲ့တယျလို့ သတငျးမှာဖျောပွထားပါတယျနျော …။
Previous: ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့မိခင် ထွက်ဆိုအပြီး ထူးခြားချက်
Next: မြန် မာ ပြည် အ တွင်း ရှိ လက် နက် ကိုင် ထား တဲ့ အ ဖွဲ့ အ စည်း များ စာ ရင်း